musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » COVID-19 dethrones 1918 flu seUS inonyanya kuuraya denda
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Huwandu hwenzufu dzakataurwa kubva kuCOVID muUS dzichapfuura mutero we1918 flu flu mwaka uno. Hatigone kuomeswa nenhamo inoenderera, uye inogona kudzivirirwa.
US COVID-19 kufa pamusoro pe675,000, ine coronavirus inotsiva 1918 flu ndiyo yakaipisisa denda reUS.
Kune zvinopfuura mazana mana emakumi mana emakumi mana ezviuru zvehutachiona hweCVID-42,000,000 muUnited States of America kubva zvino.
Furuwenza ya1918 yakauraya vanhu vanofungidzirwa kuti vaisvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nemakumi mashanu ezviuru zvevanhu vekuAmerica uye yainzi ndiyo denda rinouraya zvakanyanya munhoroondo yezvino
Kubva na4: 21pm Eastern Standard Time neMuvhuro, Gunyana 20, 675,446 vekuAmerica varasikirwa neupenyu nekuda kwe COVID-19 denda, sekureva kwenhamba dzeJohns Hopkins University, nokudaro zvichipfuura zvakapfuura kufa kwevanhu mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi mashanu nemazana mashanu ezviuru zvevanhu vekuUS panguva ye675,000 furuwenza denda.
Yakazara COVID-19 chirwere chehutachiona muUnited States chaive pamusoro pemamiriyoni makumi mana nemaviri.
Huwandu hwevanhu vakafa hunotarisirwa kuenderera mberi huchiwedzera sezvo United States parizvino iri kusangana nehumwe hutachiona hutsva, hwakakonzerwa nemusiyano uri kupararira nekukurumidza weDelta.
“Huwandu hwevanhu vakafa vachinzi vakabva kuCOVID kuUS vachapfuura huwandu hwevanhu vakabatwa nefuruwenza muna 1918 mwedzi uno. Hatigoni kuomeswa nenhamo inoenderera, uye inogona kudzivirirwa, ”akadaro tweeted Tom Frieden, aimbova mukuru weCenters for Disease Control and Prevention, svondo rapfuura.
Furuu ya1918 yakauraya vanhu vanofungidzirwa kuva mazana matanhatu nemakumi mashanu nemakumi mashanu nemakumi mashanu emamamerica, maererano ne Nzvimbo dzeChirwere Kudzora uye Kudzivirira uye yaionekwa sedenda rakaipisisa muAmerica munhoroondo ichangopfuura kusvika zvino.
Panguva ino, Mutungamiri weUS Joe Biden tichave tichiwana iyo COVID-19 booster kupfura paTV, White House secretary secretary Jen Psaki akaudza venhau neMuvhuro. Biden akave akatsunga kuita kuti maAmerican vharirwe mukati mekurudyi-bapiro kushoropodza kwemvumo yake yekudzivirira.